Fanesorana mpivarotra amoron-dalana :: Miha be mpankasitraka ny fandaminana ny arabe • AoRaha
Nitohy ny fandaminana nataon’ireo mpitandro filami­nana teny amin’ny faritra Anosy sy Andrefan’Ambo­hijanahary. Nisy vokany izao fandaminana izao satria tsy nisy mpivarotra teny amin’ny sisin’arabe sady nampi­anarina ireo mpampiasa lalana.
Nalalaka ny lalana tamin’ ireo faritra ireo na dia tsenan’i Mahamasina aza, ohatra, omaly. Maro no mankasitraka ny asa ataon’ireo Polisy sy Zandary ary Miaramila.
Noesorin’ny mpitandro filaminana avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana manakaiky ny fiantsonan’ny taksibe Anosy sy ny lalana mankany Andrefan’ Ambohijanahary, izay tsy tafiditra ao anatin’ny tsenan’i Maha­masina.
“Hita be ny fiovana rehefa malalaka ny lalana. Vita adiny iray ny lalana miala Ankaraobato mihazo an’i Mahama­sina nefa tsena androany (Ndrl:omaly). Tsy nisy mpiva­rotra mihitsy teo ampitan’ny banky BOA hatreny ampitan’ ny Antenimierandoholona iny fa dia nisosa ny fifamoi­-voi­zana. Irariana ny hitohi­zan’izao hetsika izao fa tsy atao herinandro fotsiny”, hoy ny renim-pianakaviana iray, monina eny Ankaraobato.
Rehefa nalalaka tsara ny lalana natokana ho an’ireo mpandeha an-tongotra, taorian’ny fanesorana an’ireo mpivarotra, dia nobeazina indray izy ireo mba tsy handeha eny amin’ny arabe intsony no sady natoro azy ny toera­na sy ny fomba fiampitana. Ny mpitondra fiara kosa nampianarina mijanona rehefa miara-miampita amin’ ny faritra misy famantarana ireo mpandeha an-tongotra.
Nipaka hatrany amin’ireo fiara fitateram-bahoaka ny fanabeazana. Tsy navela nijanona ela tamin’ny fian­tsonana izy ireo fa manala sy mampiditra mpandeha dia miainga, avy eo.
Tsenan’ny zavakanto Sempotry ny tsy fahafahana miakatsehatra ny mpanao hira gasy
Olan’ny fampianarana ambony :: Manambana ny hihetsika indray ireo mpianatr’Ankatso
Tantara sy lovan-tsofina :: Tanàna niandohan’ny ody varatra sy havandra Anosivato